Iyo iPhone X ine Reachability uye zvakare inoshanda nemasaini | IPhone nhau
Engadget yepakutanga mufananidzo
Wakave mubvunzo uyo vashandisi vazhinji vaizvibvunza ivo pachavo: Ko iyo iPhone X ichave nesarudzo yekugadzirisa Reachability?. Yashandurwa kuita rimwe remabasa akakosha kune vazhinji mushure mekuuya kweiyo "yekuwedzera" saizi iPhone, mubvunzo wekuti iyo itsva iPhone X yaizoramba ichingoisanganisira pakati pemaitiro ayo kubvira payakapihwa. Mhinduro izvozvi zvekuti ongororo dzekutanga dzakaburitswa ndihongu, uye inoshanda kuburikidza nemasaini.
Haisi ficha iyo kuwongorora kwakawanda kwakadonha uye vashoma chete ndivo vakatarisisa basa iri. Sezvatinogona kuona mumufananidzo wakatorwa kubva muEngadget vhidhiyo, "dzikisa" skrini kuti chikamu chepamusoro chiwanikwe uye kukwanisa kubata iyo iPhone zvakanaka neruoko rumwe zvinogoneka uye isu tinokuratidza kuti inoshanda sei pazasi.
Basa racho harishandiswe nekukanganisa, semumaenzaniso apfuura, uye unofanirwa kurimisa mukati megadziriro dzesisitimu. Kana mumamodheru apfuura yaishandiswa nekupa mabhii maviri pabhatani rekutanga, pasina kunyatso rimanikidza, iyo iPhone X isina bhatani rakanzi inoishandisa kuburikidza nemasaini, sezvaitarisirwa. Iwe unongofanirwa kutsvedza iyo diki repazasi pasi kuti iyo skrini iende pasi, sezvaungaona mumufananidzo.
Uku zororo kune avo vanoshandisa ficha iyi zuva nezuva. Kunyangwe chokwadi chekuti saizi yeiyo iPhone X yakati kurei zvishoma pane iyo yeiyo iPhone 7 ne8, Kune vazhinji vakashandiswa basa iri zvekuti ivo vanoramba vachishandisa pane ino kifaa. Zvekare rangarira kuti iOS 11.1 inounzawo sarudzo yekuratidza nzvimbo yekuzivisa kubva kuhafu yechiratidziro neReachability yakaitwa, kuitira kuti mashandiro ayo ese ave kuwanikwa pane iyo X X kana iyi yekuvandudza yaburitswa kune wese munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone X ine Reachability uye inoshandawo nemasaini
Chokwadi ndechekuti ini ndinoda kuti basa iri rinoramba richichengetwa, ini pachangu ndinorishandisa zvakanyanya.
tvOS 11.2 inovandudza HDR performance paApple TV